Lotaya Archives - Page 170 of 174 - Lifestyle Myanmar
ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့လူနေမှုဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားပေးရမလဲဆိုပြီး အဖြေရှာရတာဟာ အင်မတန်ခေါင်းကိုက်စရာကိစ္စပါ။ အစားအသောက်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောပြ၊ ရှင်းပြပေးထားတဲ့ အချက်အလက်တွေက အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ နားလည်ရလွယ်တာက ရှားပါးလှပါတယ်။ ကျန်းကျန်းမာမာ ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် မိန်းကလေးအများစုဟာ ဗီတာင်မင်တွေ၊ သတ္တုဓာတ်တွေလိုမျိုး တူညီမျှတတဲ့ အခြေခံအာဟာရဓာတ်တွေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကွန်ပေါင်းတွေက အမျိုးသမီးတွေကို အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ ကျန်းမာနေစေရန်၊ ရင်သားကင်ဆာတိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ရာသီလာချိန်တို့မှာ...
ဒီဇင်ဘာလဆိုတာ ခရစ်စမတ်စိတ်၀ိညာဉ်ရဲ့ တိကျတဲ့ အချိန်ကာလတစ်ခု ဖြစ်သလို ချစ်ခင်ကြင်နာခြင်းတွေကလည်း နေရာအနှံ့ကနေပြီးတော့ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ လူတွေဟာဆိုရင် နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ဘယ်လို အချိန်တွေမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မကြာခဏ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲလိုတဲ့ ဆန္ဒတွေရှိကြပါတယ်။ တစ်ချို့ ပေးဆပ်မှုတွေမှာ မျှော်လင့်ထားပြီးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဆိုပေမဲ့လည်း ကျွန်မတို့ကို surprise ဖြစ်စေပြီးတော့ ကျေးဇူးတင်နေရဆဲပါပဲ။ အဲ့သလို အဖြစ်အပျက်တွေထဲက ဒေသခံကျောင်းတစ်ကျောင်းမှရှိတဲ့ Santa's Secret ဆိုင်နှင့်အတူ...
ခြေထောက်ရှိ ကြွက်သားတွေကို အလေးပေးဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း သိသိသာသာ လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ထားတဲ့ ခြေထောက်တွေဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း (သို့) တောင့်တင်းခြင်းမရှိဘဲ လမ်းပိုမိုလျှောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခြေထောက်ကြွက်သားတွေကို အပတ်စဉ် ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့် ခြေထောက်ကြွက်သားတွေ သန်မာစေဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ကျစ်လစ် သန်မာတဲ့ ခြေထောက်တွေရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ခြေထောက်ကြွက်သားတွေ တည်ဆောက်ဖို့ မလေ့ကျင့်ခင်မှာ...
ပိုက်ဆံနဲ့အပန်းပြေဖျော်ဖြေမှုတွေမရှိရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုတားဆီးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုကို ခိုးယူမယ့် တကယ့်တရားခံကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀ထဲမှာကပ်ငြိနေတဲ့ အဆိပ်အတောက်လို အမူအကျင့်တွေပါ။ သင်ဟာ မှားယွင်းတဲ့ အရာတွေ လုပ်နေမိပြီဆိုရင်တော့ ခုချိန်က ဒါတွေကို ရပ်တန့်ပစ်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ မိမိကိုယ်ကို ဖျက်ဆီးနေတာကို ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ ဆီလိုက်သွားဖို့ပထမခြေလှမ်းကလွယ်ကူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်၀န်းကျင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဘယ်လိုစတင်ပြောင်းလဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို မျှ၀ေပေးချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပျော်ရွှင်မှုဟာကျွန်တော်တို့တစ်ဦးတည်းတာဝန်ယူရမယ့်အရာဖြစ်လို့ပါပဲ။ သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုအပြီးပိတ်လှောင်ထားနေတယ် ကျွန်တော်တို့ဟာ မနှစ်မြို့ဖွယ်စိတ်ခံစားမှုတွေကို...
ဝက်ခြံဆိုတာဟာ အသက်ကြီးငယ်မရွေး လူတိုင်းနီးပါးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အသားအရေဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားရောဂါအထူးကုများကတော့ လူတွေရဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှု မှားယွင်းခြင်းကြောင့် ဝက်ခြံတွေဖြစ်လာရတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ နေ့စဥ်ပြုလုပ်နေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကနေလည်း ဝက်ခြံကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသေးတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းများ အသုံးမပြုခြင်း လူအများစုက သူ့တို့သက်တမ်းတစ်လျှောက် အလှကုန်ပစ္စည်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့အသက်ဆိုတာ ငယ်သွားတာလည်းမဟုတ်သလို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ရပ်တန့်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အသားအရေအနေအထားတွေကလည်း...
ဆောင်းရာသီကို တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာတာနဲ့အမျှ အသား အရေတွေ ခြောက်သွေ့လာပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကလည်း အက်ကွဲလာကာ ခြေထောက်တွေယား၊ လက်တွေကြမ်း စတဲ့အခြေအနေတွေကို ကြုံတွေ့လာရပါပြီ။ ဘယ်လောက်ပဲရာသီတွေပြောင်းပြောင်း၊ လေအေးတွေတိုက်တိုက် အသားအရေကို နေ့စဥ်မှန်မှန် အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုပြဿနာတွေကနေ ရှောင်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ရာသီဥတုကအေးလို့ဆိုပြီးတော့ ရေပူနဲ့ချိုးရာမှာလည်း ရေကအရမ်းပူနေလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကြက်သီးနွေးထရုံမျှ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့သာချိုးပေးပါ။ ပြီးလျှင် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ကို ၁၀ မိနစ်ထက်ပိုပြီး ရေမချိုးဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။...
လူတစ်ယောက်ဟာအခြားလူတစ်ယောက်ယောက်အတွက် ကောင်းတာလုပ်ပေးခဲ့ပေမယ့် စကားလုံးနဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့တစ်ခုခုကိုပြန်ရတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလူ့သဘာ၀ပါပဲ။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေလည်း ဒီလို အခြေအနေကို ကြုံဖူးကြ လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းပေမယ့်ပြန်ရလာတဲ့ တုံပြန်မှုဟာကိုယ့်အပေါ်ထိခိုက်နစ်နာစေတာတွေနဲ့ပက်သက်လို့ သင့်ကိုနောင်တရစေလိမ့်မယ့် သင့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ အကျင့်ငါးမျိုးအကြောင်းကိုမျှ၀ေပေးလိုက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဝကို အိပ်မက်ဆိုးမက်တွေမက်စေနိုင်တဲ့ သင်အမှန်တကယ်သတိထားသင့်သည့်ကောင်းသောအကျင့်တွေကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ အရာရာကိုအခမဲ့မပေးနဲ့ သင့်ရဲ့အိမ်ကို အသုံးမ၀င်တဲ့ အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတာမျိုး ကျွန်တော်တို့မမြင်ချင်ပါဘူး။ အခြားသူတွေကိုကူညီတာဟာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါ။ ဆိုကြပါစို့။ သင်ဟာတခုခုကို အလကားပေးချင်ပြီ။ ဒါဆို...
ကြိုးခုန်ခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
ကြိုးခုန်တယ်ဆိုတာ သွေးပူဖို့ရန်အတွက် cardio လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်လျှင် ၁၀-၁၅ကယ်လိုရီကို လောင်ကျွမ်းစေသော ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး လှုပ်ရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆိုရင် အဆီပိုတွေကို လျှော့ချစေနိုင်ရုံသာမက သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို toning လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကြိုးခုန်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူများကို မျှ၀ေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ နုလုံးကျန်းမာရေးကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်း ဒါမှမဟုတ် ကြိုးခုန်ခြင်းတွေဟာဆိုရင် cardioလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံအမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှလုံးခုန်နှုန်းကို တိုးစေပါတယ်။ ပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကို...
သင့်ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက် အခြားလူတွေကျေနပ်နှစ်သက်အောင် လိုက်မလုပ်ပေးသင့်တဲ့ အချက်၇ချက်
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နှစ်သက်လက်ခံမှုရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်ကင်းစင်တယ်ဆိုတာကိုပြဖို့ ခနခနကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် မွေးကတည်းက ဘယ်သူမှပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသိဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်။ ပတ်၀န်းကျင်က လူတိုင်းကို နှစ်သက်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်တော့မဖြစ်နိင်ပါဘူး။ သူတို့နှစ်သက်လာဖို့အတွက်လည်းမကြိုးစားသင့်ဘူး။ အခြားသူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံဖြစ်စေမယ့်အစားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာလက်ခံလိုက်မှ စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှု နဲ့ စစ်မှန်သောဆက်ဆံရေးကို ကျွန်တော်တို့ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခြားသူတွေအထင်ကြီးစေဖို့ လုပ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ပစ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် ဘ၀ကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ရှင်သန်နေထိုင်သွားနိုင်မယ့် အချက်အလက်တွေကို မျှ၀ေပေးလိုက်ပါတယ်။...
အချစ်စစ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဘယ်လိုအရာများလဲ?
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ တကယ် စစ်မှန်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အချစ်တွေသာ စစ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးနိုင်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ နာကျင်မှုတွေမှုတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့အတူ ရိုးသားမှု ရှိစေဖို့ သာ သင်ယူပါ။ သင့်ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ တစ်ယောက်သူအတွက် သင်နဲ့အတူ ထာ၀ရအဆုံးတိုင်ထိ တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ အထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်တစ်ခုခု တည်ဆောက်ပေးမှာလား။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ မနုဿဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Helen Fisherက ပထမထောင်စုနှစ်ကာလအလယ်လောက်က ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့သူအတွက်...
Page 170 of 174 Prev 1 … 169 170 171 … 174 Next